Nhau Blog yeIndian Tagged "Mutambo uye Chidimbu" - THE INDIAN FACE
6 zvinhu zvaunofanira kuziva nezve Paddle Surf
Nezhizha, kuda kwemahombekombe hakugone kurambwa! Izvi zvinoratidzwa neimwe yemitambo yemvura inozivikanwa kwazvo mumakore achangopfuura, iyo Paddle Surf, mutambo wakachinjika zvekuti unokupa iwe mukana wekutora chinyararire kufamba pagungwa, kuita zvidobi zvinoshamisa, kubata mafungu mugungwa nepaddle yako.
10 zvinhu zvaunofanira kuziva nezveSurfskate
Tsvaga zvinhu gumi zvaunoda kuziva nezve surfskate! Kubva kwayakatangira uye ayo ari makuru esplatti mabhureki, kune maitiro aunogona kusarudza yako bhodhi kuti ienderane nezvaunoda. Usapotsa!
Windsurfing: mutambo wevose
Ungashinga kudzora mhepo here? Windsurfing, uyu mutambo unoshamisa uko kufambisa mhepo, seiri uye bhodhi inova imwe yekuita zvisingaite zvinoshamisa. Ndokusaka muchinyorwa chedu nhasi tasarudza zvinhu gumi zvaunofanira kuziva nezve iyo windsurf, kuti ufare uye pamwe uve mukwikwidzi wedu weOlympic.
Tsvaga iyo chaiyo nyika yeFingerskate
Wakambonzwa nezve chero yeiyo Fingerkate? Nyika ye skateboarding haina miganhu uye izvi zvinoratidzwa neuyu mutambo chaiwo uko iwe unongoda minwe yako uye bhodhi diki. Isu tinokusiira iwe zvese nezve iyo Fingerkate, tanga kuiziva uye kukurudzirwa kuzviita!
5 paradisiacal mahombekombe muSpain akakwana kushambadzira
Hazvina basa kuti uite rwendo kana izvo zvauri kutsvaga ari mafungu makuru, anenge akavanzika mahombekombe uye nharaunda dzinokutumira iwe kunzvimbo dzausina kumbofungidzira. Isu tinokuratidza iwe mashanu akasarudzika mahombekombe ane zvakasikwa zvakasiyana zvinokupa iwe paradisiacal nzvimbo, uko akanakisa nyanzvi dzevashambadziri munyika vakaongorora nekusimbisa kuti iyo surfer's paradhiso yakafanana neSpain.
10 zvinhu zvaunofanirwa kuziva kana iwe uri kutanga kubuda mukudonha
Kutarisana nehukuru hwegungwa kunogona kuve kwakaoma pamwe nekunakidza. Kudhiraivha chave chiitiko chakachinjika chinotendera vese amateurs uye nyanzvi kuti vawane zvakavanzika pazasi pegungwa. Isu tinokuudza zvese iwe zvaunofanirwa kuchengeta mupfungwa kana iwe uri kufunga kuzvinyudza iwe mumutambo uyu!
Iwo mashanu akanakisa echando paPeninsula Buritsa yako ski goggles!
Spain neAndorra zvine nzvimbo dzakawanda dzechando uye nzvimbo dzakasununguka kune zvese zvavanofarira ... Hapana mubvunzo te zviuru zvezviitiko, kusvetuka, pirouettes uye pasi zvinomirira zviteshi zvaro zvakasiyana. Wakatove wakaedza kupedzisa hunyanzvi hwako uye kuyedza iyo isinganzwisisike pirouette mune yechando nzvimbo. Pano tinokuudza iwe shanu dzakanakisa nzvimbo dzechando mupeninsula kuitira kuti iwe utarise!
Iwo anozivikanwa kupfuura ese emaraini emitambo!
Iwe uri mudiwa wenzira inomhanya uye nhabvu mitambo? Marefu marefu munzira dzinotenderedza pasirese dzakafukidzwa nemumhanyiro wevamhanyi gore ne gore off-piste, uye panguva ino isu takaunganidza anozivikanwa kupfuura ese, asiwo mamwe anonyanya kufadza, akaoma uye eccentric. Verenga pamusoro uye uwane yakakurumbira uye inodzvanya nzira yekumhanyisa kumhanyisa nyika!
Tinoda makomo nemitambo yese yatinotipa!
Iyo gomo rinotipa zvakanyanya zvekuti isu tinofanirwa kuipa iyo imwechete, kuremekedza kukuru kuti irambe iri nzvimbo iyoyo patinogona kusvika nekunakidzwa nerusununguko rwechokwadi rwatinotsvaga patinopinda madziri. Ndeupi mutambo wako waunofarira uye gomo? Kana iwe usati wapa hupenyu hwemakomo nemitambo yekushanya mukana izvozvi, usamirira zvakare! Iwe zvechokwadi hauzonyadziswa ...
Makomo akafuridzirwa nguwani Yekushanya nemitambo yakanyanyisa!
Zvisikwa zvinokoka makomo muna 2021! Uye ndeyekuti isu tinoda mitambo, kunyanya kana iri mumakomo! Pane mhando dzakasiyana dzemitambo dzaunogona kuwana iyo adrenaline, uye kugutsa kupindwa muropa kwako zvakanyanya. Unotovaziva here? Ndeupi weizvi waunodzidzira? Tsvaga zvimwe pamusoro pehukuru hwekuti mutambo wemakomo unotiunzira!
Zviitiko zvemitambo zvakati YES kusvika 2021!
Kunyangwe 2020 ikatikonzeresa kuti tishaye dzinenge dzese dzatinofarira zviitiko zvemitambo, iyi 2021 tiri kuenda nemabhatiri akachajiwa uye isu tiri kupfuura kunakidzwa kuziva kuti misi yemhemberero huru nemitambo yemitambo ichave iri. Pano tinokusiira izvo zvatinoziva kuti zvichauya ino 2021!
10 zvinhu zvinoshamisa iwe zvausingazive nezve kufashura
Isu takarongedza izvo zvakanyatsonaka zvekuda kuziva nezve zvekusevha, saka unogona kudzidza zvakawanda nezve uyu mutambo unoshamisa. Iwe haugone kuvaphotsa!
Kukwira matombo neChechu Arribas
Kukwira dombo kwandiri ndeimwe yemitambo yandinofarira uye imwe yehurefu kwazvo yandave ndichiita semumhanyi, saka shanduko yekukwira kutora mifananidzo mandiri yaive chiitiko chechisikirwo.
Paragliding in Pokhara: kubhururuka nepakati peNepal
Kana iwe uri kufunga nezve paragliding, Pokhara ndiyo imwe yezvakanakisa mavara kuti uzviite. Guta iri, iro zvakare rinodaidzwa kuti "gedhi rekuenda kuAnapurnas" (nzira inozivikanwa kuburikidza neHimalayas), rinowanikwa kumahombekombe kweLake Phewa pakati peNepal, ipo padyo neSarangkot uye kukwirira kwakatarisana negungwa. ita iyo inzvimbo yakanaka ye paragliding.
Akanakisa Kumhanya Magirazi!
Inokosha kana iwe uchidzidzira Kumhanya uye Kufamba. Mitambo yekunze inosunungura zvakanyanya muviri nemweya. Ivo vanotipa isu kunzwa kwerusununguko izvo zvisinganyatso kuitika mukati memba. Kwete chero magirazi ezuva akakodzera kune urwu rudzi rwechiitiko chekunze, zvakanakisa kupfeka magirazi emitambo akakwana anokwana kumeso kwedu zvakanaka uye kugara ipapo pamberi pechinhu chero chipi zvacho chatinofambisa.
10 zvinhu zvaunofanirwa kuziva nezvekukwira gomo kana kukwira makomo
El kukwira makomo Iyi tsika yemitambo inosanganisira kukwira nekudzika kwemakomo marefu, ayo anosanganisira akateedzana ehunyanzvi, ruzivo uye matekinoroji anovavarira kusvika panhongonya yepamusoro pemusangano wakataurwa. Kukwira makomo kwakamira kuve kwakakura kwazvo kuranga mumuviri zvichienderana nehunhu hwayo, uye inozivikanwa zvikuru nenharaunda yemitambo uye neruzhinji rwevanhu. Tsvaga zvimwe nezve iyi inoshamisa kuraira!
Kuunganidzwa kweanoshamisa kwazvo echando mitambo yemavhidhiyo
Chando, chando uye zvimwe chando! Iwe unoda zvemitambo yakanyanyisa uye nenjodzi? In The Indian Face Tinokuunzira sarudzo yemavhidhiyo emitambo yechando ayo anokusiya usingatauri. Kana iwe uchida kuona yakanyanya kushamisa stunts, kuburuka uye kupenga zvinhu zvegore rino, tinya uye kushamisika iwe neiyi nhanho yeadrenaline.
Zvakanakisa zvigadzirwa zvekudzidzira mitambo yechando pasina kutonhora
Nguva zhinji takambonzwa sviro zvishoma kana zvasvika pakuita zvemitambo muchando nekuda kwechinhu chekunze chakadai sekutonhora. Zvekuti gore rino hapana chinogona kumisa iwe mukati The Indian Face Isu tafunga kukuunzira akateedzana matipi ayo achakubatsira iwe kuwana zvakanyanyisa kubva muchando usinganetseke nechando. Gadzirira kuita nesu!